Japan Rail Pass, Japon eo am-pelatananao | Vaovao momba ny dia
Japan Rail Pass, Japon eo am-pelatananao
Mariela Carril | | soso-kevitra, Japana
Nandritra ny fotoana kelikely, ny governemanta ny Japana faly izy satria nitombo be ny mpizahatany vahiny. Roapolo taona lasa izay, tena tsy fahita firy ny mahita mpizahatany eny amin'ny araben'i Tokyo, ivelan'ny vanim-potoanan'ny voninkazo serizy tena malaza. Androany, na amin'ny firy na firy taona ianao, farafaharatsiny any Tokyo dia misy vahiny hatrany. Ho ahy, izay nandeha voalohany tamin'ny taona 2000 ary niverina tamin'ny 2016 sy 2017, dia mahatalanjona ny fiovana.
Eny, lavitra i Japon. Eny, misy zavatra any Japon izay lafo, indrindra ny fitaterana. Ny dia mamakivaky an'i Japon dia lafo fa miaraka amin'ny tambajotram-by sy ny bus dia mora kokoa izany ary fantatry ny Japoney, noho izany dia natolotr'izy ireo ilay mpitsidika azy ireo Pass Rail Japan.
1 Japon sy ny lamasinina
2 Pass Rail Japan
3 Fomba fitaterana izay manome toky anao ny JRP
Japon sy ny lamasinina
Japon dia manao sekolin'ny fiaran-dalamby ary na dia heverina matetika aza fa JR no orinasam-panjakana efa ela dia tsy izany intsony. Noho ny fandaniana lany amin'ny fitazonana ny zotra lavitra misy mpandeha vitsivitsy dia nifanehatra trosa ilay orinasa, ka tamin'ny 1987 dia nanapa-kevitra ny governemanta fa hataony privatize izany: orinasa lalamby miisa fito no noforonina tamin'ny anarana hoe Vondron-dalamby Japon, Vondrona JR.
Androany dia misy kely noho ny Làlana 27 kilometatra ao amin'ny firenena ary ny JR dia mifehy manodidina ny 20. Tao anatin'ny herintaona, ny lamasinina Japoney dia nitondra mpandeha 7.200 miliara teo ho eo. Raha manisa ny lamasinina Japoney miaraka amin'ny Alemanina isika, ohatra, dia manana lalana 40 kilometatra i Alemana ... I Japon ity! Nanomboka tamin'ny 1872, taona nanokanana ny fiaran-dalamby voalohany teto amin'ny firenena, hatramin'ny taona 2018 miaraka amin'ireo lamasinina bala dia nitety lalana lava sy nanankarena izy.
Pass Rail Japan
Raha ny hevitrao dia mivezivezy manerana ny firenena ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny mividy ity pass ity. Ankehitriny, raha hijanona any Tokyo ianao dia tsy mendrika izany, dia hazavaiko ny antony avy eo. Fa ny marina dia raha te hahalala an'i Kyoto, Osaka, Hiroshima na Nagasaki ianao, tanàna rehetra amin'ny halaviran'ny renivohitra, dia tena amporisihiko ianao.
Ny saran-dalan'ny shinkansen tokana mankany Kyoto avy any Tokyo dia mitentina eo amin'ny $ 100. Amin'izany vidiny izany dia ho azonao maninona no mendrika ny pass, Tsy marina izany? Na iza na iza dia afaka mividy azy, na amin'ny maso ivoho mpandehandeha izay manao ny fomba fanao na amin'ny Internet. Ny hany takiana a priori dia ny mividy azy any ivelan'i Japon satria ny hevitra dia tsy hoe ny Japoney mihitsy no afaka manararaotra azy. Tsy natao ho an'ny mpizahatany intsony izany.
Raha mankany Japon ianao amin'ny tanjona tsy fizahan-tany, izany hoe handeha hianatra ianao, hiasa na hanatanteraka hetsika ara-kolontsaina dia tsy afaka mividy izany ianao. Ary ny Japoney izay manana toeram-ponenana any ivelany ihany no afaka manao izany.
Hay karazany roa amin'ny Japan Rail Pass: ny Maitso sy ny mahazatra. Raha ny marina dia nividy ilay mahazatra aho ary miasa bebe kokoa noho ny tsara. Ny Green dia ampiasaina amin'ny fiara hafa amin'ny lamasinina. Ireto ny vidin'ny JRP Green:
JRP 7 andro Maitso: 38 yen isaky ny olon-dehibe ary 880 isaky ny zaza.
JRP 14 Andro: 62 yen isaky ny olon-dehibe ary 950 isaky ny zaza
JRP 21 Andro: 81 yen isaky ny olon-dehibe ary 870 40 yen isaky ny zaza.
Ary ireto ny vidin'ny JRP mahazatra:
JRP 7 andro mahazatra: 29 yen isaky ny olon-dehibe ary 110 isaky ny zaza.
JRP 14 andro mahazatra: 46 yen isaky ny olon-dehibe ary 390 isaky ny zaza.
JRP 21 andro mahazatra: 59 yen isaky ny olon-dehibe ary 350 isaky ny zaza.
Ny tahan'ny zaza dia 6 ka hatramin'ny 11 taona. Araka ny hitanao misy ny mandalo ny 7, 14 ary 21 andro ary mila manisa ianao hoe iza no mifanaraka aminao amin'ny ora fitsangatsanganana. Raha mandeha telo na efatra herinandro ianao, ny 21 andro no mora indrindra satria manome fotoana be dia be hitsidihana ny firenena ianao. Ny pass dia manan-kery raha vantany vao navadika izy ireo ary tsy ilaina ny mampandeha azy ireo raha vantany vao manitsaka ny tongotr'i Japon ianao dia afaka misafidy ny hampihetsika azy io amin'ny alàlan'ny fanitsiana izany amin'ny lalanao.
Ohatra, miverina amin'ny Mey mandritra ny 15 andro aho ary tamin'ity indray mitoraka ity dia nanapa-kevitra ny hividy ilay 7 andro aho satria mikasa ny hijanona ela kokoa any Tokyo aho ary afaka mandeha tongotra na amin'ny metro ary handany vola kely.
Ny pass azonao atao ny mividy azy hatramin'ny 90 andro alohan'ny daty handehananao any Japon. Tsy teo aloha. Ary raha misy torohevitra omenao ahy, ny filamatra dia tsy tokony hatao ara-drariny satria ny olana mahazo anao amin'ny fiaramanidina dia mety tsy hamokatra. Azonao atao izao ny mitsidika ny tranokalan'ny JRP amin'ny teny Espaniôla ary mahita hoe iza amin'ireo masoivohon'ny firenenao azonao atao ny mividy ny pass, raha tianao ny hanao azy manokana fa tsy an-tserasera.
Rehefa eo am-pelatananao izany dia tazominao tsara mandra-pahatonganao any Japon. Raha mikasa ny hampavitrika azy io ianao raha vao tonga eo amin'ny seranam-piaramanidina dia tsy maintsy mankany amin'ny biraon'ny JR ianao ary hanao ny fanovana. Ny olona any dia milaza aminao tsara ny fomba hanaovana izany ary ny pas dia manomboka mihazakazaka manomboka amin'izay fotoana izay. Tsy voatery hanao izany raha vao tonga ianao. Ohatra, mijanona 15 andro ianao nefa nividy ilay 7 ary mikasa ny hampiasa azy io aorian'ny andro vitsivitsy any Tokyo. Eny, any amin'ny biraon'ny JR hafa fotsiny ianao no manova azy (misy izany amin'ny gara rehetra).
Zava-dehibe ny mahafantatra an'izany raha very ny JRP dia tsy misy famerenam-bola Tsy misy toa izany. Very ny pass, very ny tombony. Talohan'izay dia miresaka momba ny 20 taona lasa izay aho, tsy afaka nanao famandrihana seza maimaimpoana izany ka raha manana ny mahazatra ianao dia mila mitaingina sarety tsy misy famandrihana. Mora izany satria tsy dia nisy fizahantany firy, saingy tsy izany ankehitriny, noho izany ny torohevitra omeko anao dia mandany minitra roa hamandrihana ianao.
Maimaimpoana izany, mankany amin'ny biraon'ny JR fotsiny ianao alohan'ny handraisana ny shinkansen ary hanao famandrihana. Manome anao ny tapakila izy ireo, manisy tombo-kase ny pass anao ary dia izay. Mandeha am-pilaminana ianao satria efa manana ny sezanao.
Indrindra raha mandeha amin'izao fotoana amin'ny taona izao ianao amin'ny famindrana mpandeha anatiny be: avy amin'ny 27 aprily ka hatramin'ny 6 mey, ny 11 hatramin'ny 20 aogositra amin'io volana io ary ny 28 desambra hatramin'ny 6 janoary. Farany: ny pass dia tsy maintsy aseho amin'ny mpiasa eo amin'ny toeram-pisavana, na rehefa miditra amin'ny lampihazo na rehefa mandao azy ireo. Tsy ny sehatry ny tapakila rehetra no manana trano rantsan-kazo ka tokony hikaroka ilay iray manana izany ianao. Asehoy azy, izy manamarina ny daty ary voila, mandalo ianao. Mora be.
Fomba fitaterana izay manome toky anao ny JRP
ny fiarandalamby, mazava ho azy, raha mbola ao amin'ny vondrona JR izy ireo. Raha mandeha any amin'ny orinasa hafa ianao dia mila mandoa vola. Amin'ny ankapobeny, tonga any amin'ny toerana fitsangantsanganana manan-danja indrindra amin'ny alàlan'ny JR ianao, saingy mety misy toerana izay tokony hampiarahanao na orinasa hafa. Matokia anefa fa ho an'i Kyoto, Nara, Osaka, Kobe, Kanazawa, Hiroshima, Nagasaki, Yokohama ary toeran-kafa dia tsy mila mametraka euro fanampiny ianao.
JR dia manana lamasinina, bus sy ferry. Ohatra, ny fitsangantsanganana malaza indrindra avy any Hiroshima dia mankany amin'ny Nosy Miyajima ary afaka miaraka amin'ny JRP ny sambo. Aorian'izay, mifangaro ny toerana itodiana toa ny Hakone, Nikko na ny farihy Kawaguchiko, izay rehetra ao amin'ny faritry ny Mount Fuji, izany hoe tsy ho tonga eo amin'ny alàlan'ny tsipika JR fotsiny ianao.
Ho an'ny lamasinina bala na shinkansen ny JRP dia mamela ny fampiasana maodely Hikari sy Kodama ary ny andiany 800. Ny haingana indrindra, ny Nozomi sy ny Mizuho dia mivoaka. Etsy ankilany, misy pass hafa horesahiko amin'ny antsipiriany amin'ny fidirana hafa, fa afaka mividy ianao fa tsy ny JRP: ny JR Hokkaido Rail Pass, ny JR East Pass, ny JR Tokyo Wide Pass, ny JR FLEX Japon, ny JR WEST RAIL PASS, ny JR SHIKOKU Rail Pass ary ny JR Kyushu Rail Pass.
Manantena aho fa nanompo anao ity fampahalalana ity. Raha mankany Japon ianao dia aza misalasala, JRP dia hanamora ny fiainanao. Vintana!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Japana » Japan Rail Pass, Japon eo am-pelatananao
Inona no ho hita ao Almería
Toerana 11 notsidihina kely dia kely teto amin'izao tontolo izao